जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले जिल्लाको जुनसुकै ठाउँमा सि.सि.टि.भी. क्यामरा जडान गर्दा प्रशासनबाट अनुमती लिन आग्रह गरेको छ ।
अपराध नियन्त्रण र शान्ती सुरक्षा कायम गर्न सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिने र त्यसको लागी जिलला प्रशासनबाट अनुमती लिनुपर्ने भन्दै प्रशासनले एक सुचना जारी गर्दै जानकारी गराएको हो । यहि कसैले अनुमती विपरित कार्य गरेको पाइएका कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रशासनले सबैलाई सुचना मार्फत जानकारी समेत गराएको छ ।
अहिले जिल्लामा धेरैजसो कार्यालय तथा व्यवसायीहरुले सि.सि.टि.भी. क्यामरा जडान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले बताएका छन् । कसैले अनुमती लिएर जडान गरेको र सकैले अनुमती नलिएरै जडान गरिएको अनुमान भएको उनले बताएका छन् ।
लेकाली अनलाइन सँग कुरा गर्दै उनले प्रायले अनुमती लिनुपर्छ भन्नेबारे जानकारी नभएर जडान गरिरहेको बताएका छन् । जिल्लामा अहिले अनुमानीत आधाले अनुमती लिएको र आधाले नलिएर जडान गरिएको हुनसक्ने उनले बताएका छन् ।
आफुले पहिले सि.सि.टि.भी. क्यामरा जडानको लागी अनुमती लिन भन्दै सुचना जारी गर्ने र त्यसपछि अनुगमन गर्ने अनले बताएका छन् ।